Lamaane dhawaan aqal gali rabay oo qarax ku dhintay iyagoo Muqdisho kusoo wajahan - Aayaha
Faah faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax shalay ka dhacay duleedka magalaada Muqdisho.
Qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aasay ayaa waxa uu haleelay gaari nooca raaxada ah oo ay saarnaayeen dad shacab ah, waxana ku dhintay 5 ruux oo ahaa dhammaan dadkii gaariga saarnaa.
Allaha u naxariistee dadkaan ayaa waxay miinada kula kacday meel u dhow isbitaalka Xaawa Cabdi iyadoo la sheegay in dadkaan ay ka yimaadeen degmada Wanlaweyn gaar ahaan xaafadda lagu magacaabo Malable ee ka tirsan degmadaasi.
Dadka qaraxa ku dhintay ayaa waxaa kamid ahaa wiil iyo gabar isku soo mehersaday degmada Wanlaweyn isla markaana doonayay inay ku aqal dhawaan dhawaan magaalada Muqdisho.
Wiilka iyo gabarta isi soo mehersaday ayaa markii horeba ka tagay magalaada Muqdisho waxayna dadka deegaanka sheegeen in qaraxa dadkaan ay ku dhinteen loola danlahaa gaari Cabdibile ah oo ay wateen ciidamada dowladda kaasoo ka bad baaday qaraxa balse waxa uu qabsaday qaraxa gaari ay saarnaayeen dadkaan shacabka ahaa.
Dhanka kale, shalay waxaa dhacay qarax kale oo haleelay gaari ay saarnaayeen dad kale oo aroos u socday waxana uu qaraxaas ka dhacay wadada isku xirta degmooyinka Afmadoow iyo Dhoobleey ee gobolka Jubbada Hoose.
UGAAR AH RAGGA: Calaamadahan Gabadha Hadaad Ku Aragto Way Ku Rabtaa